Qalabka Cafeic acid phenyl ester powder (104594-70-9) - Phicoker
Kalluunka Cafeic acid phenyl ester budada waa aaladda khamriga phenyl of caffeic acid iyo bioactive ......
Qalabka Caffeic acid phenyl ester powder (104594-70-9) video
Noocyada Caffeic acid phenyl ester powder (104594-70-9) Smamnuucista
Product Name Kareemka Caffeic acid phenyl ester powder
Magaca Kiimikada Kareemka Caffeic acid phenyl ester powder;
Caffeate Phenylethyl; Caffeate Phenetyl; Caffeic acid 2-phenylethyl ester; Caffeate β-Phenylethyl;
Fasalka Daroogada Tachosine Kinase Inhibitors, Ka hortagga
Molecular Wsideed 284.311 g / mol
barafku Psaliid 125-126ºC (dec.)
dhibic kulayl 498.6 ± 45.0 ° C ee 760 mmHg
SOlubility Xalka macaamiisha acetate at 50mg / ml. Iska ilaali DMSO iyo ethanol.
Storage Temperature Ku kaydi 0 ° C
Root Qalabka Caffeic acid phenyl ester powder Application Wakiilka Cytotoxic ee ka hortaga khadadka kansarka. Inhibitor of ornithine decarboxylase iyo kinase tyrosine kinase. Waxaa la ogaaday in uu yahay naqshad gaar ah oo ku saabsan isir-qorista nukliyeerka, NF-kB. Waxaa sidoo kale lagu muujiyay in si weyn loo xakameynayo wadada lipoxygenase ee metabolismka arachidone acid inta lagu jiro bararka.
Qalabka caffeic acid phenyl ester powder (104594-70-9) Sharaxaad
Noocyada Cafeic acid phenyl ester budada waa aalkolka cilada ah ee caffeic acid iyo qayb ka mid ah bioactive oo ah hindhistaha loo yaqaan 'honeybee propolis', oo leh antineoplastic, cytoprotective iyo hawlaha immunomodulating. Marka la maamulo, Root Caffeic acid phenyl ester powder (CAPE) wuxuu xakameynayaa waxqabadka nukliyeerka nukliyeerka NF-kappa B oo laga yaabo inuu xakameyn karo p70S6K iyo Akt-rukuucda wadooyinka. Intaa waxaa dheer, CAPE waxay xakameysaa PDGF-kordhinta unugyada unugyada muruqyada dheecaannada dheeli kara iyada oo loo marayo dhiirigelinta p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) iyo hypoxia-inducible factor (HIF) -1alpha iyo indho-ku-soo-saarka oksijenase-1 (HO-1) .
Ceteric acid phenyl ester ayaa lagu soo warramey inuu leeyahay anti-carcinogenic, anti-bararka, iyo sifooyinka immunomodulatory. CAPE waxay sidoo kale xakameysaa isdhexgalka HIV-1. Astaamaha ka hortagga dabiiciga ah waxaa loo maleynayaa in ay sabab u tahay xakamaynta wadada lipoxygenase ee dheef-shiid kiimikaad ah ee CAPE. Cilmi-baarista ayaa sidoo kale muujisay CAPE inay noqoto mid gaar ah oo awood u leh in la joojiyo waxqabadka nukliyeerka nukliyeerka NF kappa B, oo ah kakoolka maskaxda oo xakamaynaya qoraalka DNA. Caffeic Acid Phenetester wuxuu ka hortagaa ODC iyo Tyrosine Kinase
Qalabka Fetofoolka Fetilis Ceteric acid (104594-70-9) Habka Wax-qabadka
Ceteric acid phenyl ester waa qayb ka mid ah propolis ee finalka finalka, wuxuu xannibayaa firfircoonaanta NF-KBB oo ay ku dheehantahay phorbol ester, ceramide, okadaic acid, iyo hydrogen peroxide iyada oo looga hortagayo dib-u-dejinta qaybta p65 ee NF-κB nukleus. Qaybaha unugyada tumo ee caleenta, Ceteric acid phenyl ester waxay muujinaysaa waxqabadka antipolliferative ee leh EC50 ee 1.76, 3.16, 13.7, iyo 44.0 μM ka horjeeda murqon Xubus 26-L5, Murin B16-BL6 melanoma, manida HT-1080 fibrosarcoma iyo sambabada aadanaha A549 adenocarcinoma line lines, siday u kala horreeyaan. Ceteric acid phenyl ester, oo ah antioxidant awood leh, wuxuu ka dhigaa saameyntii anti-apoptotic ee unugyada cerebellar granule by xannibaadda formation ROS iyo ka hortagga dhaqdhaqaaqa caspase. Waxaa intaa dheer, aaladda ceterylic acid-ka Citreic acid waxay u dhigantaa ficil-celinta qotodheer ee HPS-stimulated HSCs, iyo LPS-dareen-dareen-celinta HSCs si cytokines fibrogenic by byhibit NF-κB signaling.
In vivo, Ceteraic acid phenyl ester (10 mg / kg, ip) wuxuu hor istaagaa koritaanka iyo angiogenesis ee burooyinka hoose ee C57BL / 6 iyo jiirka BALB / c oo la qaatey Lewis lung cancer, colon carcinoma, iyo unugyada melanoma. Xameetka phenyl-phenyl ester (5, 10, 20 mg / kg) ayaa sidoo kale muujinaya saameynta immunomodulatory ee kudhaca jirka iyadoo hoos loo dhigayo miisaanka thymus iyo / ama cellular of thymus iyo beeryaro.
Isticmaalka kalluunka hawada faleebo ah ee loo yaqaan "Caffeic acid phenyl ester" (104594-70-9)
▪ Qalabaynta faafidda
▪ NFKB xiraha
Faa'iidooyinka Kiniiniga Fetofil-Ceteric acid (104594-70-9)
Caffeate Phenetyl waa dhismaha laga helo propolis, isku dar ah oo ay soo saaraan shinni. Ceteraic acid phenyl ester (CAPE) waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah ka hortagga iyo daaweynta cudurrada infakshanka oo ay ka mid yihiin rheumatoid arthritis, lupus erythematosus iyo psoriasis, kansarrada kala duwan iyo cudurrada ka yimaada samaynta burooyinka, xajmiga, iyo cudurrada kale ee keena cadaadiska oksida. Waxaa intaa dheer, CAPE waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo caabuqa HIV marka la isku daro daawooyinka ku salaysan daawooyinka oo leh walax ka hor tagta taranka HIV. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa anti-atherosclerotic, antioxidative, kaardiyoteriyada, anti-buurnaanta iyo antimitogenic.